अबका विद्यार्थीको लागि नयाँ गन्तव्य न्युजिल्यान्ड – Online BBC
अबका विद्यार्थीको लागि नयाँ गन्तव्य न्युजिल्यान्ड
चैत्र १३ – न्युजिल्यान्ड जाने कुन वर्ष कति ?
०७० साउन १ देखि चैत १३ सम्म १०४
न्युजिल्यान्ड र नेपालको सम्बन्ध ६ दशक पुरानो हो । सन् १९५३ मा न्युजिल्यान्डका नागरिक एडमन्ड हिलारीले नेपाली तेन्जिङ शेर्पासँगै सगरमाथा चढेपछि दुई देशबीचको नाता नजिकिएको हो । दुई देशको सम्बन्धमा पछिल्लो समय अर्को विषयले पनि गाढापन थपेको छ । न्युजिल्यान्ड नेपाली विद्यार्थीका लागि नयाँ शैक्षिक गन्तव्य बन्दै गएको छ । तथ्यांक हेर्ने हो भने अध्ययनका लागि न्युजिल्यान्ड जाने नेपालीको संख्या वर्षेनि थपिँदै छ ।
अघिल्लो वर्ष दुई सय १७ नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि न्युजिल्यान्ड गएका थिए । पाँच वर्ष अगाडि न्युजिल्यान्ड जाने विद्यार्थीको संख्या ६८ मात्रै थियो ।
नेपाली विद्यार्थीहरू डिप्लोमादेखि ब्याचलर, पीएचडीसम्मको अध्ययनका लागि न्युजिल्यान्ड जाने गरेका छन् । विशेषगरी बिजनेस, आईटी, होटल मेनेजमेन्ट, नर्सिङ र इन्जिनियरिङ पढ्नेका लागि न्युजिल्यान्ड रोजाइको गन्तव्य बन्न थालेको छ ।
एडमन्ड हिलारीबाट जोडिएको नेपाल-न्युजिल्यान्ड नाताका कारण न्युजिल्यान्डका विद्यालयका पाठ्यक्रममा नेपालबारेका पाठ्यवस्तु समावेश छन् । न्युजिल्यान्डका नागरिकहरू नेपालबारे परिचित हुनुका साथै नेपालप्रति उनीहरूले देखाउने आत्मीयताका कारण पनि विद्यार्थीको रुचि न्युजिल्यान्ड हुने गरेको कंगारु एजुकेसन फाउन्डेसनका सञ्चालक महेशबाबु तिमल्सिनाको अनुभव छ ।
‘विश्वभर मान्यताप्राप्त नाम चलेका विश्वविद्यालय र त्यहाँको नेपाली सुहाउँदो हावापानीका कारण पनि विद्यार्थीलाई न्युजिल्यान्ड पढ्न सजिलो हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विदेशी विद्यार्थीका लागि न्युजिल्यान्डको भिसा नीति पनि एकै प्रकारको छ ।’
कुनै विश्वविद्यालय भर्ना गर्दा सुरुमै पैसा बुझाउनु नपर्ने भएकाले पनि विद्यार्थीले न्युजिल्यान्डलाई सुरक्षित गन्तव्य ठानेको मेट्स एजुकेसनका प्रकाश पाण्डेको अनुभव छ ।
न्युजिल्यान्डको कुनै विश्वविद्यालय वा पोलिटेक्निकल कलेजमा भर्ना हुनेले एप्रुभ इन पि्रन्सिपल (एआईपी) पत्र आएपछि मात्रै शुल्क बुझाए हुन्छ । सुरुमा वर्षदिनको शुल्क बुझाउनुपर्ने पाण्डेले बताए । विद्यार्थीहरूले तिरेको शुल्कको ग्यारेन्टी सरकारले लिने भएकाले बढी सुरक्षित भएको पाण्डेको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘तिरेको रकम अनुसार पढाइ हुने व्यवस्था नभए सरकारले नै अर्को विश्वविद्यालयमा ट्रान्सफर गरिदिन्छ वा पैसा फिर्ता दिन्छ ।’ न्युजिल्यान्डमा ८ वटा सरकारी विश्वविद्यालय र १८ पोलिटेक्निकल कलेज छन् ।
नेपालबाट प्लस-टु पास गर्नेले दुई वर्ष र स्नातक तह पढेकाले एक वर्ष त्यहाँ अध्ययन गरेपछि उनीहरूले थप एक वर्ष काम गर्ने वर्क परमिट पाउँछन् । त्यसबाहेक विद्यार्थीले अध्ययनको बेला सातामा २० घन्टा र बिदाको बेला पूरा समय काम गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
न्युजिल्यान्डमा पढ्न चाहने नेपाली विद्यार्थीले वाषिर्क १५ देखि २३ हजार न्युजिल्यान्ड डलर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । भर्ना हुन चाहनेले अंग्रेजी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कुनै कलेजले अंग्रेजी माध्ययमा पढेका विद्यार्थीलाई बिनाभाषा परीक्षा पनि भर्ना लिने गरेका छन् ।
ग्रयाजुयट हेल्थ डिप्लोमाका लागि ओखलढुंगाका सुविन भट्टराई १९ हजार ५ सय -साढे १६ लाख) बुझाएर एकवर्षे कोर्सका लागि जाने तयारीमा छन् । उनी काम पाइए एक वर्ष ‘जब सर्च भिसा’अन्तर्गत न्युजिल्यान्डमै अनुभव लिने सोचमा छन् । ‘अनुभवका लागि भए पनि उतै काम खोज्छु,’ एप्लाइड हेल्थका सुविन भन्छन्, ‘नेपालमा हेल्थ मेनेजमेन्ट गर्दा अनुभव काम लाग्छ ।’
न्युजिल्यान्डका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट छात्रवृत्ति पाएर पनि नेपालीहरू अध्ययनका लागि गएका छन् । सिभिल इन्जिनियरिङमा पीएचडीका लागि युनिभर्सिटी अफ कन्टेरबुरीबाट छात्रवृत्ति पाएका काठमाडौंका विकास श्रेष्ठ पनि न्युजिल्यान्ड जाने तयारीमा छन् । बैंककबाट सिभिल इन्जिनियरिङ सकाएका उनी तीन वर्षका लागि न्युजिल्यान्ड जान लागेका हुन् ।
बेलायत, अस्टे्रलियाले जस्तो विदेशी विद्यार्थीलाई आम्दानीको स्रोतको रूपमा प्राथमिकता नदिए पनि न्युजिल्यान्डको शिक्षाले विदेशी विद्यार्थीहरूलाई आकषिर्त गरिरहेको छ ।
न्युजिल्यान्डमा विद्यार्थीहरू किन आकषिर्त हुँदै छन् ? न्युजिल्यान्डका विश्व- विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने नेपाली एजेन्टको मान्यता पाएकाहरू भन्छन्, ‘त्यहाँको पढाइ बिक्छ ।’
Published 28 March 2014. Kantipur.
Prevभारतको सिमानामा तारबार लाग्दै छ :ओली
Nextखुशिको खबर : कोरियामा यो वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा तीन गुणा बढी कामदार जाने